Child – Page 31 – Healthy Life Journal
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘဝ ဝင့်ယမုံလှိုင်
တစ်နေ့တာ အသားရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ ညီမက မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ရေအဝသောက်တယ်။ အသားအရေစိုပြည်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်မှန်အောင် ရေများများ သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ခါနီးဆိုလည်း နွားနို့သောက်တယ်၊ အိပ်ခါနီး နွားနို့ပူပူလေး သောက်ပေးရင် အိပ်လို့လည်း ကောင်းတယ်၊ အသားအရေအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုတယ်၊ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ...
ဆင်းရဲသား ပိုင်ဆိုင်သည့် ကြွယ်ဝမှု့
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ မိုးသူနဲ့ တိုးကျော်တို့က အိမ်နီးနားချင်းတွေပါ။ မိုးသူက ဆင်းရဲတဲ့ လယ်သမားဖြစ်ပြီး တိုးကျော်ကတော့ လယ်မြေသူဌေးပေါ့. .။ လယ်သမား မိုးသူက အမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အေးအေးလူလူ ရှိလှပါတယ်။ အိမ်တံခါးနဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ညဘက်မှာတောင် ပိတ်ထားခြင်း...
သွားဖုံး သွေးယိုနေရခြင်း အကြောင်းရင်း ရှစ်ရပ်
၊ လရိပ်မေ ၊ တစ်ခါတစ်ရံ သွားတိုက်ရင်း သွားဖုံးကနေ သွေးယိုတတ်သလို တစ်ခါတလေ အကြောင်းရင်း မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ သွားဖုံးကနေ သွေးယိုတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (၁) ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး အားနည်းခြင်း ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး အားနည်းလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ နံနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်...
ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး သုံးသင့်/မသုံးသင့်သော အခြေအနေများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကို မလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အသုံးများတာကြောင့် ဆေးယဉ်ပါးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုဖြစ်စေပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို မသတ်နိုင်တဲ့အပြင် တလွဲသုံးစွဲမှု့ကြောင့် ပြည်သူလူထုမှာ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး...
ဘာကြောင့် ဆံပင်တွေ ကျွတ်နေရတာလဲ….
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆံပင်တွေ သိသိသာသာ ကျွတ်နေတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သေချာနားလည်ပြီး ကုသမှု ခံယူပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ * ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု့ * ခွဲစိတ်ကုထုံး၊ ယာဉ်မတော်တဆ ထိခိုက်မှုနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ နာမကျန်းမှု့ဝေဒနာ...
အောက်မျက်ခွံအောက်တွင် အမည်းစက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး မျက်ခွံအောက်မှာ အမည်းစက်တွေ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ သက်သာအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ မျက်ခွံအောက်မှာ အမည်းစက်လေးတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုတွေ့ရပါတယ်၊...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ဆေးကျောင်းသားအဖြစ်မှ ဆရာဝန်၊ ဆရာဝန်အဖြစ်မှ အထူးကုဆရာဝန် စသဖြင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ ပါမောက္ခရာထူးအထိ အဆင့်ဆင် ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသော ဆရာဝန်ကြီးတို့၏ဘဝသည် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်းနေရခြင်း မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် ယခုအချိန်အထိ လူနာများစွာကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးနေဆဲ...
ငယ်ဘဝရဲ့ အရိပ်တွေ . .
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဉာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည် ကျော်ကျော်က အသက် ၂၀ အရွယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ပေမယ့် စကားအလွန်နည်းပြီး အပေါင်းအသင်းကလည်း အလွန်နည်းတယ်။ ဒါ့အပြင် အေးအေးဆေးဆေး၊ နှေးနှေးကွေးကွေး သွားလာတတ်တယ်။ “သားလေးကြည့်ရတာ လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ မတူဘူး၊ လေးလေးလံလံ...
ဘာကြောင့် အိပ်ရာနာ ဖြစ်တတ်သလဲ
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ အိပ်ရာနာ (Pressure Sore)က အဖြစ်မများလောက်ဘူးလ ို့ထင်ရပေမယ့် နာတာရှည်ရောဂါရှိသူတွေဟာ အိပ်ရာနာကြောင့် ကျန်းမာရေး ယိုယွင်းထိခိုက်မှု့ အကြီးအကျယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာနာ ဖြစ်နိုင်ခြေများသူတွေအကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီး ဆင်ခြင်ဂရုစိုက်နိုင်စေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ - အသက်ကြီးသူ...